"Fluid Mask 3" na "DefenseVPN", ngwa ọdịnala abụọ na ọnụ ala belata | Esi m mac
«Fluid Mask 3» na «DefenseVPN», ngwa ngwa abụọ dị oke ọnụ ahịa
Anyị na-amalite izu ọhụrụ na onyinye ohuru na nkwalite na ngwa nke ị nwere ike ime ka ọtụtụ nke ọ bụghị naanị Mac gị, kamakwa ihe okike gị, nke bụ eziokwu bụ na taa Mọnde nkwupụta ahụ nwere ụzọ abụọ, ma dị iche.
N'otu aka anyị nwere «Fluid Nkpuchi 3», ngwa ọrụ echepụtara maka ndị na-ese ihe nkiri, foto, wdg; n'aka nke ọzọ anyị nwere "NchekwaVPN", ngwa nke ị nwere ike izere geo-mgbochi ma na-echekwa nzuzo gị na data na nchekwa site na ndị ọzọ,
1 Fluid nkpuchi 3
Fluid nkpuchi 3
"Fluid Mask 3" bụ ọkachamara ihe oyiyi edezi ngwá ọrụ maka Mac na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na n'ígwé, ma ọ bụ kama nke ahụ, na-eme ọrụ nke ebipụ ma jikọta ihe dị iche iche site na ihe oyiyi dị iche iche na otu foto.
Ọ bụ sọftụwia dị elu nke, dịka ndị mmepe ya siri dị, ụlọ ọrụ okike ama ama dịka BBC, Disney, Hallmark, ESPN, NBC na ndị ọzọ. «Fluid Nkpuchi 3» mmemmem enweghị nkebi image mwekota site igbutu iberibe site na otu na machie ha na ndabere nke ndị ọzọ. O nwere "ihe pụrụ iche segmented masking usoro" ekele nke nhọrọ nke akụkụ ị chọrọ idobe bụ "kemgwucha dị mfe", ọbụlagodi mgbe ịchọtara nkọwa ndị chọrọ nkenke dị ka akpụkpọ ma ọ bụ ntutu.
«Fluid Mask 3» na-arụ ọrụ ịrụ kpọmkwem cutouts ma ihe ma anumanu, ndi mmadu na ebe. Ke adianade do, o nwere dịgasị iche iche nke brush ya mere ị nwere ike tee ma see ihe na nkpuchi. Ihe ndị ọzọ pụtara ìhè bụ:
Mfe chọta n'ọnụ gị ihe oyiyi, na-enye gị ohere ikewapụ iche ihu na ndabere.
Mee super mma agba nkpuchi họpụta.
Ikwadoro iche iche ebe siri ike ma tinye ntọala ntụpọ, na-agwakọta ọtụtụ nyocha ihu na usoro ngwakọta n'ime otu onyonyo ahụ
Ga-enwe ike ịchekwa nhazi nke oghere ọrụ ga - arụ ọrụ ma emechaa.
Ọ dakọtara na ogbe nhazi.
Enyele njikwa zuru oke nke onye ọrụ interface na customizable agba ntọala.
Na nkenke, "Fluid Mask 3" nwere akara ngosi nke ịbụ ezigbo ngwa ọrụ maka ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ nke ọma na onyogho na ndị chọrọ ngwa nke na-enye oke nkenke.
Usualgwọ ya bụ $ 99, mana ugbu a ị nwere ike irite uru na ntinye ego 74% maka naanị $ 24,99 ebe a, maka naanị nkwalite nke «Dollar abụọ Tuesday». Agbanyeghị, ịkwesịrị ime ọsọ ọsọ ntakịrị n'ihi onyinye a gwụchara etiti abalị a. Cheta na iji "Fluid Mask 3" ị chọrọ Mac yana OS X 10.4.11 ma ọ bụ karịa dị ka sistemụ arụmọrụ.
Site na ihe okike dị ka imewe na idezi onyonyo, anyị na-awụlikwa elu gaa ihe ọfụma karịa ma nwekwaa ike maka ụdị onye ọrụ ọ bụla. Nke a bụ "DefenseVPN", ngwa ọrụ nwere ike inyere anyị aka na-eche odi mfe na nke a dijitalụ ụwa nke fọrọ nke nta kwa ụbọchị na anyị maara nke ọhụrụ nche flaws, hacks na ndị ọzọ.
"DefenseVPN" bụ ịba uru nke na-elekọta zoo adreesị IP gị na ọnọdụ gị ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ka ndị ọzọ mara ebe ị nọ. Ma n'ezie, ị nwekwara ike jikọọ na netwọk ahụ n'ebe ọ bụla n'ụwa si otú a na-ezere mgbochi geo - ọdịnaya ndị a na-ahụkarị na ọrụ dị ka Netflix, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Otu n'ime atụmatụ ndị dị mkpa nke "DefenseVPN" bụ:
Teknụzụ data nzuzo abụọ na-eme ka nchekwa nchekwa.
Ime nchọgharị na ngagharị na ntanetị 1 Gbps.
Mfe ntọala na enweghị ndebanye achọrọ.
Gbanwee nke iji gbanyụọ njikọ netwọk gị ma ọ bụrụ na njikọ VPN adaa.
Ugbu a ị nwere ike nweta otu Ndụ ndenye aha na «DefenseVPN» maka ya naanị $ 39,99, nke na-anọchite anya mbelata atụmatụ nke 94% ma e jiri ya tụnyere ihe karịrị narị dollar asaa ọ ga-efu. Onyinye ahụ kwụsịrị na ụbọchị asaa ma ị nwere ike ịnweta ya ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » «Fluid Mask 3» na «DefenseVPN», ngwa ngwa abụọ dị oke ọnụ ahịa
Ọhụrụ Amazon Fire TV 4k na-akwado PIP ma na-enye gị ohere ịdekọ mmemme
Firefox webatara mmelite ọhụrụ na ihe nchọgharị ya maka Mac